Liverpool oo Ka Adkaatay Kooxda Swansea City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Swansea City ayaa waxaa garoonkeeda Liberty Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Liverpool.
Ciyaaryahan Jordan Henderson ayaa daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa axadda soo socota garoonkeeda Anfield kula ciyaari doonto kooxda Manchester United oo labo dhibcood ka sareeyso.
Kooxda Liverpool hadii ay badiso waxa ay gali doontaa kaalinta afaraad ee horyaalka ingiriiska.
Kooxda Liverpool oo uu hogaamiyo macalin Brendan Rodgers ayaana wax gool ah laga dhalin lix kulan oo xiriir ah oo ay ku ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda.
Kooxda Liverpool ayaa kaalinta shanaad ka soo gashay kala horeynta horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 54-dhibcood,halka kooxda Swansea City ay horyaalka uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 40-dhibcood.
Reading oo u Soo Baxday Semi-finalka Koobka FA Cup-ka “SAWIRRO”